Safidin'ny tavoahangy tsara indrindra - TopFillers
Home / Capping Machines / Bottle Capping Machine
Automatique High Speed ​​Plastique Screw Water Troupe Cap Machine
Bottle Capping Machine, Capping Machines
Fampidirana ny milina fanodinana haingam-pitaterana haingana: Ny fikarohana dia novolavolaina sy novolavolan'ny orinasa miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro amin'ny alalan'ny fampisehoana teknolojia avo lenta avo lozam-pifamoivoizana avo lenta izay afaka misoroka ny fahasimban'ny fonon-tanana. Izy io dia mampifanaraka ny fanodinana kapila, manamboatra sy manindrona. Ny dingana manontolo dia manara-maso ny haingam-pandeha sy ny fahombiazany ary ny fahombiazany sy azo antoka. Ary ny fitaovana fantsona kapila dia manana rafitra fanaraha-mason'ny polisy izay manampy azy hahatsapa fa ny milina dia miasa rehefa tsy misy kapa ary mivoaka rehefa feno kapo mba hahafahan'ireo kapoditra arahina automatique. Karazana tavoahangy samihafa no ...
Fanondrahana Shampoo / Essais / Olivanina Olivanina Olona misesisesy
Fampahafantarana sy toetra manokana voalohany - Ampiasao ny rafitra programa PLC, ny rafitra fanaraha-maso pneumatic ary ny fàfana mandeha amin'ny ordinatera mba hamoronana ny foibem-pitantanana, afaka manitsy haingana fihenam-bava. - Aorian'ny famenoana, dia apetaho eo amin'ny tavoahangy fenoina ny kapa-kapary manamboatra azy, ary farano amin'ny fehin-koditra. Voafehy ny cap cap, afaka manamboatra ny capteur sorter & cap feeder miaraka, automatique mameno ny dingan-dava. - Mampiasa vy (316 / 304) ho an'ny faharetana tsara sy ny fanarahamaso ny fahadiovana, ny milina iray manontolo araka ny fenitra GMP, mora alamina sy madio. - Vehivavy manaiky ireo singa elektrômika malaza eran-tany ...
Kitapo feno tavoahangy vita amin'ny tavoahangy
Ny kitapo dia mpitaingin-tsoavaly manana sarivongana marobe, tsy hoe fanodinana volom-borona fotsiny, fa mametaka ny hoditra koa. Amin'ny ankapobeny ho an'ny vatana izay mifatotra amin'ny siny tavoahangy ary koa misy peratra antitra antitra, dia afaka mihodina sy manindrona ny rindrina (ny iray hafa-revolver tsy manana ny asany). Aorian'ny fametrahana ny fametrahana ny fitaovana azôty azôty, dia mety hanampy ilay nitroka ao anaty tavoahangy. Ny mari-pamantarana dia manana mari-pahaizana automatisation avo, afaka mandamina ny rindrina, manala ny vodi-dehiba, manomboka ny takelaka automatique. Ny lohan'ny lohalika tsirairay dia manana fiendoana mba ahazoana antoka fa tsy manimba ny vatana. Izy io dia mifanaraka amin'ny karazany rehetra.
Rotary automatique tavoahangy vita amin'ny tavoahangy
Ny tena mampiavaka azy io dia ny fiara fitaterana vao haingam-pandeha vaovao, miditra ny sotro rindran-damba, ny karazana kapila, ny sakafo matsiro, ny fako, ny tavoahangy miaraka. Tsara ho an'ny kapaotra samihafa, ary tena mahafatra-miasa amin'ny kapoaky ny halatra. Ny kapila dia takarina ary napetraka tsara, tsy mampidi-doza ho an'ny kapila mandritra ny fiara. Vitan'ny haingam-pandeha haingana sy haingam-pandeha tsara indrindra, tsy miteraka mihetsika, mety hahatratra ny haavon'ny iraisam-pirenena ny vokatra mitovy amin'izany. Ireo singa elektrika dia mampiasa marika malaza iraisam-pirenena, izay manome antoka ny kalitaon'ny masinina sy ny fiainany amin'ny serivisy, ny rafitra ara-dalàna, ny fahombiazany, ny feo malefaka, ny tontolo iainana mahafinaritra. Ny fonon'ity milina ity dia efa voahidy ...
Tavoahangy solika mameno tavoahangy mametaka 3 amin'ny 1 Famonoana ny vidin'ny vidiny
Feno fanamafisam-peo tanteraka amin'ny famolavolana tanteraka Famaranana fototra Ity milina famenoana ity dia karazana famenoana masinina miaraka amin'ny fitsipika ambany vaksiny mba hahitana ny famenoana divay. Ny masinina dia ampiasaina betsaka amin'ny famenoana fitondra mofomamy toy ny divay, ny divay, ny voankazo, ny mineraly, ny soja soja, ny vinaingitra, sns., Indrindra indrindra fa ny famenoana ireo container manana hery lehibe. Asa fitetezana Efficiency: haingana ny haavon'ny fihenan'ny haavon'ny haavon'ny haavon'ny vokatra, hatramin'ny tavoahangy 4500 / ora. Ny habe dia lehibe: ny hamaroan'ny tavoahangy dia 60 100mm, ny haavo tavoahangy dia 200 360mm, lehibe ny famenoana, ny fanitsiana dia ...
Tavoahangy miloko haingam-pandehan'ny vitamina Rotary Rotary
Vitan'ny haingam-pivarotana haingam-pandehan'ny vitamina Rotary tapakila fanodinana Ity milina fanodinana automatique ity dia mety amin'ny rondron-koditra, manaparitaka manaparitaka / manaparitaka, afaka miara-miasa amin'ny fametrahana an-tariby efa misy, hetsika fitantanana elektrôlika, mafy orina; miaraka amin'ny fitaovana fantsona, Capping standard, mora ampiasaina; Fitaovana be dia be azo ampiasaina amin'ny endrika sy habe samihafa, dia mamaha ilay olana sarotra amin'ny kapaon-tsofina, kapa matevina, pump pulp, sifotra basy amin'ny bokotra tanana. Azo atao ny manisy tombo-kase amin'ny fefy mihodinkodina araka ny fitondran-tena marevaka.Widely ampiasaina amin'ny savonety, shampoo, gely dite, gera fanadiovana gny, fanasan-damba fanasan-damba ary vokatra hafa hafa isan'andro. Characteristic 1, PLC controlled, integrated cap caping (automatic cap ...
Fonosana vita amin'ny tavoahangin-tsolika manontolo mipetaka amin'ny shampoo
Automatique capping machine dia manamboatra kapa fandefasana kapa, kapaty lamasinina, tavoahangy fanamafisam-peo ary kodiarana kodiarana. Amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fehikibo, ny tavoahangy dia mamita ny hetsiky ny scratch, manindrona sy manindrona. Mihatra amin'ny fisiahana amin'ny tavoahangy boribory boribory lava izy io. Ity milina fandiovana ity dia amin'ny rafitra mora sy ny fanitsiana. Rehefa manova ny karazan-tavoahangy, tsy mila manova ny ampahany ny sompitra, fa ny fanitsiana fotsiny dia ampy. Ny singa endri-javatra 1. Ny milina iray manontolo dia mampiasa marika Schneider izay afaka mahazo antoka ny fahamarinan'ny masinina. 2. Ny fantsom-batana napetraka ao amin'ny kapila fanina. Rehefa any ...
Semi-Automatik automatique spindle tappet machine
Ny endriky ny milina fanontam-penitra semi-automatique nosoratana dia natao mba hiatrehana ny karazan-tavoahangy ankapobeny, ny diameters izay arakaraky ny 10mm ka hatramin'ny 100mm. Manaraka ny fomba fiasan'ny 'iray ny môtô iray manara-maso ny kodiarana iray', izay ahafahana miantoka ny milina miorina tsara ary mitazona torolàlana tsy tapaka mandritra ny fotoana maharitra ny asa. Fanomezan-kalem-panahy: 1. Manaraka ny fomba fiasan'ny 'iray ny môtô iray manara-maso ny kodiarana iray', izay ahafahana miantoka ny milina miorina tsara ary mitazona torolàlana tsy tapaka mandritra ny fotoana maharitra ny asa. 2. Ny fametahana fehikibo dia azo alamina manokana, izay ahafahan'ilay milina mety amin'ny tavoahangy fisaka amin'ny ...
Fitaovana fanodinana milina fanontam-bary
Ny endriky ny milina fanontam-pirinty nosafotofoto dia natao hamahana ny ankamaroan'ny karazan-tavoahangy vita amin'ny tavoahangy, ny diam-pandehan-javatra amin'ny 10mm ka hatramin'ny 100mm. Manaraka ny fomba fiasan'ny 'iray ny môtô iray manara-maso ny kodiarana iray', izay ahafahana miantoka ny milina miorina tsara ary mitazona torolàlana tsy tapaka mandritra ny fotoana maharitra ny asa. Ny mpaninjara bobongolo vibrating sy elevating dia vita amin'ny vy tsy misy rà ary tsara kalitao, vidin'ny fifaninanana. Quality assurance 1. Manaraka ny fomba fiasan'ny 'iray ny môtô iray manara-maso ny kodiarana iray', izay ahafahana miantoka ny milina miorina tsara ary mitazona torolàlana tsy tapaka mandritra ny fotoana maharitra ny asa. 2. Ny fametahana ...
2-in-1 automatique tavoahangy vita amin'ny tavoahangy sy kapila manify
Fanafody famafazana menaka automatique
5 Gallon Barreled Fitetezana ranon-rano madio / fitaovana / famokarana
Fitaovana fanodinana milina fanontam-pirinty vita amin'ny tavoahangy
High Quality automatique Toilet mangatsiaka mameno ny milina